Fast & Furious 8 (Super Hit) Iyo Begum Jaan (Flop) Ganacsiga Ay Sameeyeen Talaadadooda Kowaad Gudaha Hindiya - Hablaha Media Network
Fast & Furious 8 (Super Hit) Iyo Begum Jaan (Flop) Ganacsiga Ay Sameeyeen Talaadadooda Kowaad Gudaha Hindiya
HMN:- Filimka Hollywood-ka ah Fast & Furious 8 ayaa Hit weyn gudaha Hindiya ka noqday sida ay shabakada Boxoffice India xaqiijiseyna filimkaan Super Hit ayuu noqday.
Dhinaca kale filimka Bollywood-ka ah Begum Jaan ee Vidya Balan hogaamiye ka tahay wuu guul dareestay waana Flop sida Boxoffice India xaqiijisay.
Marnaba horey taariikhda fanka Hindiya ugama dhicin ilaa 90-maadkii laga soo gaaray in filimada Hollywood-ka gudaha Hindiya ku garaacaan kuwa Bollywood-ka.
Balse sanadihii ugu dambeeyay ayayba ugu daran tahay jabka Fast & Furious 8 uu u geestay filimka Begum Jaan waxay digniin cad u tahay in Bollywood-ka suuqooda lagu qabsaday sidoo kalena Hindiya aysan sameyn karin filim xitaa 60% tayadiisa wanaagsan tahay si daawadayaasha lacagtooda u bixiyaan.
Fast & Furious 8 ma gaari doono Fast & Furious 7 wuxuuna ganacsi ahaan ka hooseen doonaa 10% waayo sida muuqato Fast & Furious 8 cimri ahaantiisa 85 Crore ilaa 88 Crore inta u dhaxeyso ayuu ku istaagi doonaa.
Filimka Begum Jaan wuxuu ku dhibtoon doonaa inuu 20 Crore gudaha Hindiya kasoo xareeyo waxaana la yaab ah filimkaan 19 Crore lagu qarash gareeyay oo ah miisaaniyad aad u xadidan inuu guul daro la kulmo.
Fadlan hoos kaga bogo filimka Begum ilaa haatan ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeeyay:
Sabti – 3.25 Crore
Axad – 3.75 Crore
Isniin – 1.50 Crore